Laporta oo shaaca ka qaaday fikradiisa ku aadan dib u cusbooneysiinta qandaraaska Osman Dembele – Gool FM
(Barcelona) 02 Dis 2021. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa shaaca ka qaaday fikradiisa ku aadan dib u cusbooneysiinta qandaraaska xiddiga reer France ee Osman Dembele.
Sidoo kale wargeyska Sport ayaa xaqiijiyay in Barcelona ay ku dhowdahay inay lacag la’aan darteed u weyso adeega Osman Dembele kaddib marka uu dhammaado heshiiskiisa kooxda bisha June ee soo aaddan, iyada oo ciyaaryahanka uu ku dhagan yahay shuruudo qaar ee adag oo dhanka dhaqaalaha ah, si uu u saxiixo heshiis cusub.
Haddaba Joan Laporta ayaa maanta kala hadlay warbaahinta arimo ku saabsan qandaraas kordhinta Osman Dembele ee kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Howlgalka heshiis kodhinta wuxuu u socdaa si ka gaabis ah, laakiin waxaan wali ka shaqeyneynaa xallinta dhammaan arrimaha, waxaan sii wadeynaa inaan ku dadaalno inaan seefaheena kor u qaadno.”
“Aad ayay muhiim u tahay in Dembele uu dib u cusbooneysiiyo, waa ciyaaryahan aad muhiim ugu ah kooxda, kaasoo tixraac u noqon kara Barcelona haddii aan ku guuleysano inaan sii dheereyno xiriirkiisa waqtigan xaadirka ah.”
Sport ayaa soo wariyay in Dembele uu doonayo in loo kordhiyo mushaarkiisa qandaraaska cusub, isaga oo la siinayo gunno saxiix heshiiska cusub ah, taas oo ka hor imanaysa xaallada adag ee dhaqaale ee kooxda.